Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride bụ anesthetic mpaghara na ......... ..
ikike: 1400kg / ọnwa
SKU: 5984-59-8 Category: ibu Loss
Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder (5984-59-8) chloride Nkọwapụta
Chemical Aha Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride; 2-Heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (1: 1)
Klaasị ọgwụ ọjọọ Specialty Chemicals
molekụla Fnhazi C8H20ClN
molekụla Wasatọ 165.7041
Nkịtị Monoisotopic 235.207 g / mol.
esi ebe 229.3 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ nọgide na mmiri (ọkara ndụ 2 ụbọchị)
Sume a na-edozi ya n'ime mmiri ammonia, hydrazine, nke kachasị soluble na acetone insoluble na diethyl ether, ethyl acetate
Antinye ejiri mee ihe dị ka onye na-ahụ maka acidifying acid na-agwọ ọrịa alkalosis metabolic siri ike, na -eme ka mmiri chọpụta distal renal tubular acidosis, ịnọgide na-enwe mmamịrị na acid pH n'ime ọgwụgwọ ụfọdụ ọrịa urinary-tract.
raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8) Nkọwaputa
Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride bụ ihe na-emepụta ihe na NH4Cl na nnu ọcha crystalline bụ nke a solu na mmiri. Ngwọta nke ammonium chloride dị nwayọọ acidic. Salmoniac bụ aha nke okike, ụdị nke ammonium chloride. A na-ejikarị ịnweta ọkụ ọkụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ site na nchịkwa nke gas sitere na coal. A na-ahụkwa ya n'ebe ụfọdụ ụdị ifufe mgbawa. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka fatịlaịza na onye na-anụ ọkụkọ n'ụdị ụdị mmanya. Ọ bụ ngwaahịa ahụ site na mmeghachi omume nke hydrochloric acid na amonia.
A na-emepụta nchịkọta mpaghara site na ngwa ngwa okpomọkụ nke ihe ngwọta nke hydrochloride ma ọ bụ ntọala efu nke 2-Amino-6-methylheptane na anya rabbit. N'ịgbanyeghị na nkịta ndị anwụrụ na pentobarbital sodium, 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride na-egosipụta 1 / 500-1 / 1000 ọrụ nke epinephrine. A chọpụtara 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride na-eme ka mmụba nke mkpụrụ obi obi na njupụta nke mgbagha. N'ịgbanye n'ime nkịta, anesthetized na pentobarbital sodium, doses nke 0.5 ka 1.0 mg kwa kilogram nke 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride enweghị mmetụta a na-achọpụta na obere eriri afọ, detrusor nke eriri afọ urinary, sụgharịrị urine ma ọ bụ respiration. N'ihe na-atụghị anya na oke, 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị usoro nhụjuanya nke na-eme ka ihe na-akpali akpali na-adịghị egbu egbu. Enweghị ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme nke mgbakasị nke mucosa tracheo-bronchial osisi dị na rabbits ma ọ bụ oke nke na-eme ka ihe ntanarị 2-Amino-6-methylheptane kwa ụbọchị maka ụbọchị 10 na 30 kwa ụbọchị.
Iji nke (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8)
▪ Ime egwuregwu.
▪ Mfu ọnwụ.
▪ Dịka onye ahịa ọgwụ nke octamylamine
▪ Onye na-ahụ maka acidifying acidic
Na-atụ aro (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8) Ụdị
Naanị maka amaokwu:
Enweghị usoro nhazi edozi maka (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride, ma ọ bụ dabere n'ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ na ihe yiri ya na DMAA, mkpụrụ ndụ nchekwa na-edozi ahụ ga-abụ 1mg / kg nke oke ahụ ruo 160mg. LD50 (mkpụrụ ọgwụ chọrọ iji gbuo ọkara nke anụ ule niile) nke (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride to the teeth is 59mg / kg. Ọzọ, ọ kachasị mma ịgidesi ike n'usoro mgbanwe maka ugbu a ma dị mma, a ga-enyerịrị nyocha ọzọ tupu ịhapụ nkwupụta zuru ezu na mgbakwunye. Oge na-agbazi oge, ọ kachasị mma iji oge 30-60 gaa n'ihu mgbatị iji nyere aka mepee akụkụ nke ọzụzụ, ebe enwere ike iwere ya n'ụbọchị dum dịka onye na-egbu nri.
Uru nke (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8)
♦ Na-eme dị ka ndị bronchodilators (ịgbasapụ bronchi maka mmụba ndị ọzọ)
♦ Arụ ọrụ dị njọ (na-eme ka ọkpụkpụ ọbara ghara ịdị na-ebelata ma ọ bụ ya mere ike ịkụ ume).
♦ Ọganihu dị mma na nkwụsị siri ike nke agụụ.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride nwere ike iji mee ihe maka iweli elu bu ikike ya iji bulie ike ike ma melite anya na nlebara anya.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder jidere usoro yiri nke a na-ahụ dị ka ndị ọrụ nnyefe monoamine. Nke ahụ bụ, ọ nwere ike ịbawanye ọkwa nke monoamines dị ka dopamine na noradrenaline.
♦ O nwere ike kwadoro mgbatị siri ike ma belata RPE (ọnụ ọgụgụ nke ike a na-ahụ anya).
Nkọcha L-Carnitine (541-15-1)
L-Carnitine ntụ ntụ bụ ihe okike, vitamin-dị ka nri na-edozi nri na nri, ọ na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'ime mmepụta ike site n'ibufe ......
Raw 1,3-Dimethylbutylamine ntụ ntụ (108-09-8)
Raw 1,3-Dimethylbutylamine (1,3-DMBA) ntụ ntụ, ma ọ bụ nanị dimethylbutylamine (DMBA), bụ ọgwụ na-akpali akpali ... ..
ikike: 1490kg / ọnwa
Ụdị Synephrine (97-07-5)
Synefrine bụ nke dị na osisi citrus sitere na ezinụlọ Rutaceae, ọ bụ alkaloid sympathomimetic. Synephrine nwere atọ dị iche ...... ..
HCL nke Synephrine bụ ihe na-emekarị na-emepụta ọgwụ dị iche iche nke alkaloid a na-ahụ maka osisi dị iche iche na-emepụta iji mee ihe dị ka mmeju ...... ..